Mareykanka oo madaxda DF ugu goodiyey cunaqabateyn kaddib muddo kororsigii Golaha Shacabka | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Mareykanka oo madaxda DF ugu goodiyey cunaqabateyn kaddib muddo kororsigii Golaha Shacabka
Muqdisho (Halqaran.com) – Dowladda Mareykanka ayaa uga digtay madaxda Soomaaliya in ay saari doonto cuna-qabateyn iyo in laga xannibi doono dal kugalka Mareykanka, haddii aysan Dowladda Federaalka ka laaban muddo kororsiga uu Aqalka Hoose u sameeyay.
Xoghayaha arrimaha dibedda Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay in dowladda Mareykanka ay aad uga niyad jabtay go’aanka ay dowladda federaalka Soomaaliya ku ansixisay sharci laba sano ku kordhinaya muddo xileedka madaxweynaha iyo baarlamanka.
“Waxaan caddeynay in Mareykanka uusan taageeri doonin muddo kororsi aan haysan taageerada saamileyda siyaasadda Soomaaliya, iyo hanaan doorasho oo hal dhinac ah iyo kuwa is-dhinac socda. Ficillada noocan ah waxay noqon doonaan kuwa aad wax u kala qeybiya, waxyeeleeya hanaanka federaalka iyo isbeddelada siyaasadeed ee xudunta u ahaa horumarka dalka iyo saxiibtinimada beesha caalamka, waxayna dareenka ka weecinayaan Al-Shabaab. Waxay sidoo kale dib usii dhigayaan qabashada doorasho qancisa shacabka Soomaaliyeed,”ayuu yiri Xoghayaha arrimaha dibedda Mareykanka Antony Blinken.
Sidoo kale waxa uu sheegay in ficillada socda dowladda Mareykanka inay dib u qiimeyso xiriirka ay la leedahay dowladda federaalka Soomaaliya, oo ay ku jiraan midka diblomaasiyadeed iyo kan kaalmo, isla markaana ay ka fakarayaan wax kasta oo ay heli karaan, oo ay ka mid yihiin cunaqabateyno iyo xayiraado visa, si ay uga jawaabaan dadaallada lagu waxyeeleynayo amniga iyo xasilloonida Soomaaliya.